N'elu 5 Best Day Njem Site Brussels | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > N'elu 5 Best Day Njem Site Brussels
N'elu 5 Best Day Njem Site Brussels
Ingbọ oloko na Belgium, Ụgbọ oloko njem Holland, Luxembourg ụgbọ oloko, Zụlite njem Netherlands, Njem Europe
I nwetara na aka na akụkọ ihe mere eme, nka, na omenala nke Brussels na ị dị njikere inyocha ná mpụga obodo ókè-ala-now. Daalụ, e nwekwara ọtụtụ inyocha n'ime a ụbọchị njem si Brussels. Nke mere, na anyị kpebiri itinye a ndepụta 5 Best ụbọchị njem si Brussels dị nnọọ ka ị!
Ghent bụ na anyị 5 Daybọchị kachasị mma site na ndepụta Brussels n'ihi na a maara ya maka ịbụ otu n'ime akụ ochie nke Belgium na uru ọdịnala ya, ya bụ; egwu, nkiri, film, na visuals. Ọ bụkwa ibu nso Brussels, dị naanị 60 kilomita site na Brussels, ma nwee ike iru ya ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè.
Otu n'ime ihe kachasị mma iji mee na obodo ochie a bụ ịchọpụta ya n'ụkwụ, enwetaghị a hụperetụ nke ya ịrịba ochie ije, nakwa dị ka na-eche ya vibrant ikuku.
otuto The ofufe dịịrị nke omimi Atụrụ site Van Eyck ụmụnna dị n'ime Saint Bavo Cathedral. Gaa Leta Belfry nke Ghent, Town Ụlọ Nzukọ, ma bịaruo nso na ahia ahia obodo na Old Fish Market.
Amsterdam a na-mara maka ya na-akpali cafes! (Ọ bụrụ na ị maara ihe m chere!) ma, ekwela ka nke ahụ ghọgbuo gị. Amsterdam bụ otu n'ime Nke kacha mma 5 Best ụbọchị njem si Brussels n'ihi na ọ bụ na-ebe izu nke akụkọ ihe mere eme, omenala, na art.
Inwe na aka n'oge gara aga na Anne Frank House, ịmụta banyere art na Rijksmuseum, Van Gogh, na Rembrandt Remlọ ngosi ihe mgbe ochie, na-enwe ama Heineken Ahụmahụ. Adventurous njem nwere ike ịgbazite bike na ịchọpụta na n'okporo ámá, akụkọ ihe mere eme akara, na isi pubs nke Amsterdam. Ma ugbu a, romantics nwere ike a pụrụ iche Amsterdam ahụmahụ mgbe ụtọ a-atụrụ ndụ ụgbọ mmiri siri.
Ọ na-ewe 2.5 awa si Brussels ka e. ozugbo ị hop kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè, gaa isi obodo Grand Duchy wee bido njem gị site na ịgagharị nkeji iri na ise Kirchberg na ọtụtụ ụlọ ya ndị dị mkpa dịka Courtlọikpe Ikpe nke Europe, na European Commission. Iju na Notre Dame Cathedral, akara ngosi nke na-agwakọta ulo oru Gothic n'oge na ihe ịchọ mma Renaissance. Gaa n'ihu na-awagharị awagharị gburugburu maa mma n'okporo ámá. Ị gaghị agbaghara akụta a ghọta nke Obí nke Grand Duke na obodo e wusiri ike.
Dị ka ọtụtụ Belgium obodo, na ebe ahia nwere ọmarịcha usoro ihe owuwu. Nke a bụ n'ihi na a otutu nke ochie ije foduru e weghachiri eweghachi. On a obi ụtọ dee, ma ọ bụrụ na ị na-a foodie, mgbe ahụ ị ga-enwe omenala Flemish nri na N'ezie, biya.
Njikere inyocha n'ofè Brussels? Ee? Chekwa ụgbọ oloko nwere ike inwe ị na-e, na-enweghị zoro ezo ụgwọ na a ezigbo onye na enweghị nkebi ntinye akwụkwọ usoro. Easy!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Easy Day Njem Site Milan Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-brussels%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
bruges	Brussels	Daytrips	Ghent	Luxembourg	ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ	Njem	njem nlegharị anya
Zụlite njem Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Ụgbọ oloko njem Holland, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Zụlite njem Netherlands, Njem Europe
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Zụlite njem Netherlands, Njem Europe